Nuummite, si Greenland. amiabole mineral gedrite na anthophyllite. Video
Nuummite, si Greenland
Nuummite bụ oké nkume metamorphic nke na-agụnye mineral amphibole gedrite na anthophyllite. A na - akpọ ya n'agbata Nuuk na Greenland, ebe a chọtara ya.
Ngwurugwu na-abụkarị oji na agba na opaque. Ọ na-agụnye amphibles abụọ, gedrite na anthophyllite, nke na-etolite exsolution lamellae nke na-enye nkume ahụ ọkpụkpụ ya. Ndị ọzọ na-ahụkarị mineral na nkume bụ pyrite, pyrrhotite na chalcopyrite, nke na-eme ka mpi ọla edo na-egbuke egbuke.
Na Greenland, a na-akpụ nkume ahụ site na mpempe abụọ na-edochi anya nke nkume mbụ. Mbido ahụ malitere na Archean gburugburu 2800 nde afọ gara aga, a na-edepụta ihe ndị dị na 2700 na 2500 ọtụtụ afọ gara aga.
A na-achọpụta nkume ahụ na 1810 na Greenland site na onye na-ahụ maka ihe omimi KL Giesecke. A kọwapụtara ya ọkà mmụta sayensị site na OB Bøggild n'etiti 1905 na 1924. A na - achọta Ezi Nuummite na Greenland. N'ihi ọdịda ya, nkume ndị a na-achọkarị na-achọ ndị na-ere ahịa, ndị na-achịkọta na ndị nwere mmasị na ndị na-enweghị ihe ọ bụla. A na ere ya mgbe ọ na-agwụcha.
Udi di iche iche di iche iche
Ụdị: (Mg2) (Mg5) Si8 O22 (OH) 2
Ụdị usoro: 780.82 gm
Agba: Nwa, isi awọ
Twinning: Ọ dịghị onye
Ịgba chaa chaa: zuru oke na 210
Ikwasi ike nke Mohs: 5.5 - 6.0
Luster: Vitreous / kenkowaputa
Njupụta: 2.85 - 3.57
Ntughari ihe omuma: 1.598 - 1.697 Biaxial
Feng Shui dị na Nuummite
Mmiri mmiri, ike nke ịdị jụụ, ike dị jụụ, na ịdị ọcha. Ọ na-emetụta ikike ndị a na-enwebeghị. Ọ na-ekwenye ekwenye, na-adịghị edozi, ma dị ike. Mmiri mmiri na-eweta ike nke ịdịghachi na nlọghachi. Ọ bụ ike nke gburugburu ndụ. Jiri cristal turquoise mee ka ohere ọ bụla ị na-eji mee ka ị daa, ntụgharị uche, ma ọ bụ ekpere. Mmiri mmiri na-ejikọta na ebe ugwu nke ụlọ ma ọ bụ ụlọ. A jikọtara ya na mpaghara Career na Life Path, ike ya nke na-eme ka ike gwụ gị ka ndụ gị na-aga n'ihu.
Gemological Institute nke Cambodia / GEMIC Laboratory Co., Ltd. © Copyright 2014-2018, Gem.Agency